Tsy misy sarontava hafa toa ireo noforonin'i Ýrúrarí | Famoronana an-tserasera
ny ny saron-tava dia toa lasa anisan'ny fitafiantsika miaraka amin'izany isika. Ary ireo ao Ýrúrarí dia mety ho lasa fanao mahazatra faran'izay kely hitantsika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Una tolo-kevitra mahaliana an'ity mpanakanto ity izay miasa ireo sarontava ireo amin'ny endrika hafahafa ary mety hahagaga ny olona rehetra izany. Nandritra ireo herinandro nitazomana ireo dia noforonin'ilay mpanakanto ireto sarontava ireto izay ananantsika anarana tokana: vava sy lela.
Raha omaly izahay dia nijanona gaga amin'ny asa amin'ny toast avy amin'ity mpanakanto Japoney ity, ankehitriny dia manana iray hafa isika, noho io fotoana io tao an-trano, dia namorona hevitra tena mamorona.
Hafahafa be izy ireo fa manana lasa lasa viral ny sasany hangataka izany. Angamba tsy dia be loatra izy ireo mandritra ireo volana mafana ireo, fa ho an'ny fahalavoana sy ny ririnina dia toa lavorary izy ireo.
Ny tanjony dia ny hitondra fomba hafa hahatakarana ny famolavolana sarontava izay manarona ny vavanao sy ny oronao ary amin'izany dia hialana amin'ny areti-mifindra; na farafaharatsiny manakana anay tsy hiharan'ny hafa. ny refesina mihoatra ny zava-dehibe hisorohana ity virus ity tsy hiparitaka izay mbola ananantsika any an-trano amin'ireo faritra ireo. Farafaharatsiny any an-drenivohitr'i Espana dia toy izany.
Ny zavatra mahaliana momba ny tolo-keviny dia saika ny rehetra namboarina ireo singa mandrafitra ireo sarontava mahaliana ireo irery. Nalainy ny milina fanjairany ary tsy nitsahatra namorona ireny sarontava ireny izy fa raha zavatra hafa no tadiavinao dia nahita ny toerana mety ianao.
Manana isika ny instagram hanohy ny asany ary ny tranokalanao raha te hahalala misimisy kokoa momba ny ahiahinao. ny fandraisana andraikitra lehibe famoronana, somary hafahafa ihany, saingy tena ara-potoana izany amin'izao andron'ny covid-19 izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo sarontava tsy mahazatra an'ny Ýrúrarí
Amin'ny vahaolana misy vahaolana dia azonao jerena ny sary hosodoko Rembrandt "The Night Watch"